Safiirka Soomaaliya u fadhiya Qaramada Midoobay Danjire Abuukar Baalle ayaa sheegay in saddexdii sano ee la soo dhaafay aysan jirin dhibaatooyin ay kooxaha Burcad badeeda ka geysteen xeebaha dalka Soomaaliya.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in ay muhiim tahay in la soo afjaro la-dagaalanka Burcad Badeeda Soomaalida, qorshahaasna uu yahay mid ku yimid qiimeyn la sameeyay 10-kii sano ee la soo dhaafay.
Danjire Abuukar Daahir Cismaan (Abuukar Baalle) oo la hadlayBBC-da waxaa uu sheegay in sababta dowladda Soomaaliya u dooneyso in meesha laga saaro guddiga ka hortagga Burcad badeedda ay tahay in ay yareedaan weeraradii burcad badeeda ka geysan jireen xeebaha Soomaaliya, isla markaana xoogeena & dadaalkeena la isugu geeyo meelaha kale ee dibaatooyinka kajiraan.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay wado qorsho looga hortagayo Maraakiibta & doomaha sida sharci darrada ah uga kaluumeysta xeebaha Soomaaliya iyo kuwa Wasaqda ku shubo taas oo dhibaatooyin kala duwan ay ka dhalan karaan.
Guddiga xiriirka ka hortagga burcad badeedda xeebaha Soomaaliya oo ay dooneyso Dowladda Soomaaliya in meesha laga saaro ayaa waxaa la sameeyay sanadkii 2008-dii markii ay kordheen weerarada Burcad Badeeda, waxaana wareegto kusoo saaray golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyada oo sanad walba muddo kordhin loo sameeynayay.
Previous articleFarmaajo oo baaq u diray Maamul goboleedyada aan soo gudbin Guddiyada doorashooyinka
Next articleGuddiga Doorashooyinka lagu mursan yahay oo wada qorshe lagu soo saarayo Jadwal Doorasho